Fivoriambe Iraisam-pirenena Voalohany Tany Indonezia
MPITORY an-jatony avy any amin’ny faritra maro eran’i Indonezia no tafavory tao Bandung, atsinanan’i Jakarta, tamin’ny 15-18 Aogositra 1963. Nisy vahiny 122 avy any amin’ny tany maro koa tao. Hanatrika ny fivoriambe “Vaovao Tsara Mandrakizay” izy ireo. Io no fivoriambe iraisam-pirenena voalohany teto Indonezia.
Nila nandresy vato misakana maro ireo rahalahy rehefa nanomana azy io. Intelo novana ny toerana hanaovana an’ilay izy, noho ny fankalazana fetim-pirenena. Nidangana be koa ny vidim-piainana ka nitombo efajato isan-jato ny saran-dalana. Novan’ireo rahalahy fotsiny anefa ny fitaterana nandehanany. Nandeha an-tongotra enina andro ny rahalahy iray mba hanatrehana an’ilay fivoriambe. Nisy solontena 70 avy any Sulawesi nandeha sambo nandritra ny dimy andro, ary teo amin’ny tokotanin-tsambo feno olona no nisy azy ireo.
Faly erỳ ireo rahalahy sy anabavy teto Indonezia rehefa nihaona tamin’ireo mpiara-manompo vahiny. Teo, ohatra, ry Frederick Franz sy Grant Suiter, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Hoy ny rahalahy vahiny iray: “Hita hoe falifaly ireo rahalahy eto. Mihomehy sy miramirana foana ry zareo.”
Nisy 750 mahery ny mpanatrika ary 34 no natao batisa. Hoy i Ronald Jacka: “Niavaka iny fivoriambe iny, ka maro tamin’ny olona liana no nanaiky ny fahamarinana. Ireo rahalahy teto an-toerana kosa vao mainka nazoto nanompo.”
Ronald Jacka (havanana) nanao lahateny tamin’ny fivoriambe “Vaovao Tsara Mandrakizay”, 1963, miaraka amin’ny mpandika teny